Michael K. Williams, mpilalao sarimihetsika manana talenta tsara tarehy dia maty
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Michael K. Williams, mpilalao sarimihetsika manana talenta tsara tarehy dia maty
by Waylon Jordan Septambra 6, 2021
by Waylon Jordan Septambra 6, 2021 2,606 hevitra
Michael K. Williams, mpilalao sarimihetsika taloha an'ny efijery kely sy lehibe, dia maty. Isan-karazany nanamafy ny vaovao tamin'ny NYPD. Hita tao amin'ny tranony tao Brooklyn ilay mpilalao. 54 taona izy.
Teraka tao Brooklyn ny 22 Novambra 1966, nanao satroka isan-karazany i Williams tamin'ny asany efa naha-mpilalao sy mpilalao an-tsehatra azy. Izy dia niasa ho toy ny choreographer sy ny mpandihy tany am-piandohan'ny asany izay nisehoany tamin'ny horonantsary mozika niaraka tamin'ny mpanakanto marobe ary nitety an'i George Michael sy Madonna talohan'ny nanapahany hevitra hitady zavatra matotra.
Nahazo andraikitra vahiny sy anjara asa kely kokoa izy tamin'ny voalohan'ny taona 2000 talohan'ny nandefasana azy tamin'ilay fiheveran'ny maro ny asany amin'ny maha Omar Little azy. The Wire ary taty aoriana toy ny Chalky White amin'ny Empire Empire.
Rehefa nitombo ny herin'ny kintana dia nitombo koa ny fanatrehany tamin'ny haino aman-jery hafa. Ireo mpankafy Genre dia azo inoana fa hahafantatra an'i Williams amin'ny fampisehoana nataony tamin'ny taona 2014 RoboCop, Ny lalana, Ny Hafa: Anarchy, ary ao amin'ny HBO's Firenena fitiavana izay nanendrena azy ho Emmy. Ity dia tsy hiteny afa-tsy ny asany mitohy ivelan'ny karazana amin'ny andiany toa Hap sy Leonard, miorina amin'ny boky nosoratan'i Joe R. Lansdale, sy ao amin'ny Rehefa mahita antsika izy ireo, miorina amin'ny tantara marina an'ny Central Park Five.
iHorror dia mandefa ny fiaraha-miory amin'ny namana sy fianakavian'i Michael K. Williams.